कोरोना नियन्त्रणमा लव्ध प्रतिष्ठित लागौं « Aarthik Sanjal कोरोना नियन्त्रणमा लव्ध प्रतिष्ठित लागौं – Aarthik Sanjal
कोरोना नियन्त्रणमा लव्ध प्रतिष्ठित लागौं
२९ चैत्र २०७६, शनिबार १५:३६
भाष्करराज राजकर्णिकार –
कोरोनाको अप्ठ्यारो अवस्थामा सबैजना सम्भबत घरमा धेरै समय बिताउदै छौ । हामी जस्तो संचारकर्ममा हुने मान्छेहरु पनि आफ्नो कर्म गर्दा गर्दै पनि घरमा बडी समय रहने गरेकाछौ ।
तर साधारणतया अहिले पनि हामी १० घण्टा कार्य छेत्रमा नै छौ । जब जब चाडबाडको रमाइलो होस् , घर परिबारले खोज्ने समय वा आफु र अफ्नोलाई संग हुनुपर्ने समयमा हामी ‘ कर्म ‘ लाइ नै प्राथमिकता दिनुपर्ने दायित्व निर्बाहमा नै हुन्छौ ।
तिबेला मैले अनुभब गरेको एउटा कति यथार्थ के हो भने मान्छेको खास पहिचान यस्तै अबस्थामा हुदो रहेछ । सम्भबत मानबिय सम्बेदनशिलता अनि यति विषम परिस्थिति शायद हाम्रो जिबनकालमा अर्को यो भन्दा विषम नहोला । तर यस्तो अबस्थामा पनि मानिसहरु आफ्नो लोभ , लाभ , अनि व्यक्तिगत स्वार्थ , अनाबश्यक प्रतिस्पर्धा अनि तेरो मेरो , म ठुलो कि त ठुलोमा जसरी अहिले पनि जसरी लागिरहेका छन् ।
लाग्छ , मान्छेको मनमा समबेदना , करुणा , दया भन्ने मानबिय चरित्र नै हराइसकेका छन् । हुने खाने र हुदा खाने समाजका दुइ वर्ग हाम्रो समाजको पनि कटु यथार्थ हो ।
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको ‘ कटु सत्य ‘ हो यो , जतिसुकै समाजबादी सिद्धान्त बोकेको मान्छेहरुले पनि आफ्नो वरिओअरि यसलाई ‘ फल्न फुल्न ‘ दिएकै छन् हाम्रो समाजमा ! तर इतिहासकै यस्तो घडीमा पनि हामी हामीले आ -आफ्नो ठाउँ बाट गर्नसक्ने कुरा बाट नै किन बिमुख भैरहेका छन् हाम्रा ‘ हुनेखाने वर्ग ‘ ? के साँचै हाम्रो समाज र देशको क्षमता नै यति नै हो त ?
यदि हाम्रो समाजका लब्ध , प्रतिष्ठित बर्गहरु अगाडी नआउने हो भने ‘ कोरोनको कहर ‘ बाट बिजय हाशिल गर्न गाह्रो हुनेछ । सरकार एक्लैले यो समस्या साचै भयाबह भए लड्न गाह्रो छ र एउटा ‘ सत्य ‘ यहि हो अवस्था हामीले सोचे जस्तो ‘ सहज र सरल ‘ पक्कै छैन । इति श्री !!